Intec head office - contact details
Intec kiyi yevashandi vekubata ruzivo.
Mepu yenzvimbo mhenyu uye fomu rekuonana rakananga rinogona kuwanikwawo pazasi pepeji.
Ian Melville ndiye maneja director weIntec Printing Solutions. Yakavambwa angangoita makore makumi matatu apfuura, Ian zvino anoita imwe yenguva yake kumabasa ekubatsira achishanda nechikwata chake chepamusoro kuona kuti Intec imutungamiri wekirasi mudiki fomati yedhijitari yedhijitari nhandare.
Terri ndiye musoro wekushambadzira kwepasirese uye PR. Iye nedhipatimendi rake, vane basa rekugadzirwa kwezvinhu zvese zvekushambadzira, zvese zviri pamhepo uye zvakaoma kopi, kuve nechokwadi chekuti kambani nechiteshi chayo chekugovera zvakashongedzerwa zvizere nezvibatiso zvekutengesa zvazvino.
& kugadzirwa kwechigadzirwa
Mark ndiye mutungamiriri webhizinesi & kugadzirwa kwechigadzirwa mukati meIntec. Anoshanda nezvikwata zvedu zveR&D kugadzira zvigadzirwa zvitsva, uye nezvikwata zvekutengesa kugovera zvigadzirwa zvedu zvitsva zvinonakidza nevatengesi nevashambadziri pasi rese.
Technical services maneja
Steve anotungamira iyo UK tekinoroji masevhisi uye dhipatimendi rekutsigira vatengi.
Nebasa rinodadisa muindasitiri yekudhinda yakatora makore gumi nemapfumbamwe, Steve ane ruzivo rwekushanda mumatanho akawanda ekudhinda anosanganisira dijitari, litho, web offset uye sirika sikirini.
Kerry Button, ndiye Sales Director wedu ane basa rekutengesa kwedu kuEurope, Middle East, Africa neAsia. Kumhanyisa zvikamu zvekutengesa zvakavakirwa muUK yedu head quarters, Kerry anotsigira vatengesi vedu nevashambadziri vachishanda navo kugadzira kutengesa uye kuvaka yavo Intec Bhizinesi.
Chris anotonga yedu yekupedzisira mushandisi yekutengesa dhipatimendi remidziyo yehardware. Bata Chris kune ese ekupedzisira mushandisi anofarira uye anobvunza zveIntec zvigadzirwa muUK uye muEurope Middle East, Africa neAsia.
Fiona ndiye mutongi wedu Wemari, ane makore mazhinji 'yekutengeserana uye maindasitiri ruzivo kumashure kwake, ari kutungamira kuchengetedza hwaro hwakasimba hwemari hwekambani uye kuve nechokwadi chekuenderera kwayo kukura kwemari.
Alison ndiye mukuru weInternational Consumable sales, anotsigira vatengesi vese veIntec nevashambadziri muEurope, Middle East, Africa neAsia nezvavanoda zvinodyiwa zveIntec zvine hukama zvigadzirwa.
Ryan achangobva kuwedzera kuIntec uye anounza makore gumi nemaviri 'akaundi manejimendi ruzivo kukambani.
Ryan chikamu chakakosha chehurongwa hwekuwedzera kwekambani, uye haingovavarira chete kukura network yedu yepasi rose yevatengesi, asi zvakare kusimudzira nekuvaka hukama hune pundutso uye hwenguva refu.
Mutengi sevhisi injiniya
Andy anga aine kambani makore anopfuura makumi maviri uye akaunganidza ruzivo rusingaenzaniswi rwezvese zvazvino uye zvenhaka zvigadzirwa. Andy ndiye mukuru wedu wekugadza mainjiniya anogara achifamba pasi rose achimiririra vatengi vedu.
Ruzivo rwake rwakakura rwakamugonesa kuve mudzidzisi wedu wechigadzirwa, zvese mumba uye panzvimbo.
Kutenga & Logistics maneja
Helen akapedza makore ake mashanu ekutanga neIntec seMutengesi maneja asati ava nzvimbo huru yekambani yekuonana kwese kutenga uye kuita zvinhu.
Zvikwata zvedu zvehardware uye zvinodyiwa zvekutengesa uye zvakare rutsigiro rwehunyanzvi uye zvikwata zvebasa revatengi zvinogona kusvikwa pa…
Kuti uwane mhinduro inokurumidza kune chero mubvunzo, ingo email timu yedu yekutengesa pano…
Intec UK head office yakavhurirwa bhizinesi pakati:
Tumira Intec UK meseji uchishandisa fomu riri pazasi